Otu esi eme nkwalite na Ubuntu 21.10 Imish Indri Beta site na 21.04 - LinuxCapable
Otu esi eme nkwalite na Ubuntu 21.10 Imish Indri Beta site na 21.04
October 13, 2021 August 16, 2021 by Jọshụa James
Ubuntu 21.10: Ụbọchị mwepụta
Gbaa onye njikwa nkwalite
Na-akwalite 21.10 Imish Indri
Nleba anya mbụ
Nhọrọ - Wepụ ngwugwu ochie ochie
Mwepụta obere oge nke Ubuntu na-abata, nke akpọrọ Ubuntu Impish Indri 21.10, na-ahụ. GNOME 40 dị ka desktọọpụ ndabara. Agbanyeghị, Ubuntu 21.10 a na-atụ anya iji ụgbọ mmiri GNOME 41 na ntọhapụ ikpeazụ na Linux Kernel 5.13 ma ọ bụ nke ọhụrụ. Atụmatụ ndị ọzọ a ga-agụnye:
Isiokwu ọkụ Yaru na ndabara
Ihe nrụnye ọhụrụ ejiri Flutter mee
Zstd mkpakọ maka ngwugwu
Enyere Wayland maka ndị ọrụ ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA
Mmelite mmetụ aka
New akwụkwọ ahụ aja
Nkuzi na-esote ga-egosi gị otu esi ebuli na Ubuntu Beta 21.10 ngwa ngwa na nseta ihuenyo maka nkwadebe maka mgbe ọ dara. Ị nwere ike iji usoro a ugbu a maka ịkwalite na ngalaba mmepe.
Ubuntu 21.10 Impish Indri ga-adị maka nbudata na Ọktoba 14, 2021. Nke a bụ ụbọchị dị ugbu a na LanchPad, nke bụ isi mmalite mmepe Ubuntu.
Ihe na-esonụ bụ ihe dị ịrịba ama ma ọ bụ usoro iheomume maka Ubuntu 20.10
Ntugharị ifriizi: Aug 19, 2021
UI kwụsịrị: Sept 9, 2021
Kernel ifriizi: Sept 30, 2021
Hapụ Nwa akwukwo: Oct 7, 2021
Ntọhapụ ikpeazụ: Oct 14, 2021
Ndị a nwere ike ịgbanwe ma enwere ike igbu oge ma ọ bụ gbasaa n'otu oge.
Nzọụkwụ mbụ bụ imepe ọdụ Ubuntu gị (Ctrl+ALT+T) na pịnye na iwu na-esonụ:
Iwu ahụ na-emepe njikwa mmelite, mana enwere -d nhọrọ. Maka ndị na-amaghị, ndị -d nhọrọ na-agwa ya ka ọ chọọ mwepụta mmepe.
Dabere na njikọ ịntanetị gị na ihe ndị ọzọ, ọ nwere ike were obere oge; Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ kwesịrị ịhụ windo ndị a na-apụta n'ime nkeji.
Ozugbo mpio ahụ pụtara, pịa ya kwalite… bọtịnụ.
Nkwalite ahụ ziri ezi. Agbanyeghị, dabere na kọmpụta gị ma ọ bụ ngwa nkesa na njikọ ịntanetị gị, ọ nwere ike were nkeji iri na ise ruo iri atọ ruo ọtụtụ awa. Nkuzi a ga-agbada ihuenyo ị ga-ahụ n'oge nkwalite.
Kwụpụ 1. Ị ga-ebu ụzọ hụ ndetu ntọhapụ. Cheta, nke a bụ mwepụta ngalaba mmepe nke ekwuputara nke ọma. Ejila ntọhapụ a ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-arụ ọrụ na gburugburu mmepụta ma ọ bụ isi ọrụ gị nke na-enweghị ike ị nweta nsogbu.
pịa upgrade bọtịnụ ka ịga n'ihu na nkwalite.
Kwụpụ 2. Ozugbo i gachara na ndetu ntọhapụ, ị ga-abịa na ngosipụta ihuenyo Ị chọrọ ịmalite nkwalite ahụ? Ihuenyo a na-egosi nkọwa nke ihe a ga-arụnye, adịghịzi mkpa, na ihe ngwugwu ga-akwalite.
Pịa Malite nkwalite ịmalite usoro.
Rịba ama, ị ga-ahụ mmapụta ndị a na-agwa gị na a ga-enwe nkwarụ mkpọchi ihuenyo n'oge usoro nkwalite ruo mgbe sistemụ arụmọrụ gị ga-amalite iji hụ na nkwalite dị mma.
Kwụpụ 3. Ozugbo emechara nrụnye nkwalite, a ga-akpali gị iwepu ngwugwu ochie achọghịzi. Ọtụtụ ndị ọrụ kwesịrị pịa wepụ ọ gwụla ma ha nwere otu ihe kpatara idobe ngwugwu ahụ.
Pịa Wepu (A kwadoro) or na-:
Kwụpụ 4. Mgbe ịhọrọchara iwepu ma ọ bụ dobe ngwugwu ndị na-adịghị adị, nrụnye agwụla, ị ga-achọkwa ịmalitegharị usoro Ubuntu gị ka emechaa nkwalite ahụ.
Pịa Malitegharịa ekwentị ugbu a:
Kwụpụ 5. Ozugbo ị malitegharịrị sistemụ arụmọrụ gị, 21.10 Impish Indri ntọhapụ kwesịrị ịwụnye nke ọma. Iji gosi nke a, meghee ọdụ Ubuntu gị (Ctrl+ALT+T) ma jiri iwu na-esonụ:
Ekele, ị tinyela ma kwalite nke ọma na Ubuntu 21.10 Impish Indri.
Ozugbo ị banyere, ị ga-ahụ ndabere ndabere ọhụrụ yana obere mgbanwe UI / nkwalite:
Ma ugbu a, menu ngwa:
Mgbe nkwalite ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ihe niile arụ ọrụ nke ọma na ọ nweghị mmejọ ọ bụla mere, ọ na-adị gị mma iji hichaa sistemụ gị site na iji iwu na-esonụ iji wepụ ma hichaa sistemụ arụmọrụ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka ị ga-esi kwalite ntọhapụ obere oge Ubuntu 21.04 dị ugbu a na ngalaba mmepe na Beta n'ọdịnihu maka 21.10 Impish Indri. N'ozuzu, a ga-eji alaka mmepe ahụ naanị maka ndị na-anụ ọkụ n'obi, ndị mmepe, ma ọ bụ ndị ọrụ ike nwere ike ịnagide ngwugwu agbajiri na mperi sistemu. Ihe ndị a na-ewu abụghị maka nkezi onye ọrụ ruo mgbe onye nyocha RC ikpeazụ dị.
Categories Ubuntu Tags Ubuntu 21.10 Impish Indri Mail igodo
Otu esi etinye Skype na Rocky Linux 8
1 chere na "Otu esi eme nkwalite na Ubuntu 21.10 Imish Indri Beta site na 21.04"
September 26, 2021 na 9: 35 am
I kwesịghị itinye autoremove –purge ma emeziwanye ya. Ị ga-ehichapụ nhọrọ maka onye ọrụ ịlaghachi na kernel gara aga ma ọ bụrụ na nkwalite ahụ agaghị arụ ọrụ.